Enwere m ike ihicha sys pagefile? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Wughachi sysfilefile sys - nkọwa zuru ezu
Wughachi sysfilefile sys - nkọwa zuru ezu
Enwere m ike ihicha sys pagefile?
Chọta ihe “mechie: Clear mebere ebe nchekwapeeji nke”Nhọrọ na nri pane na abụọ-pịa ya. Pịa nhọrọ “nyeere” na windo njirimara nke pụtara wee pịa “OK”. Windowsgaugbu a kpochapụ ihepeeji nke peejioge ọ bụla ị mechiri.29 nke 2016
Gịnị bụ Pagefile.sys? Enwere m ike ihichapụ ya? Ndewo onye obula.
Leo Notenboom ebe a maka Askleo.com. Nke a bụ otu ajụjụ kachasị ọtụtụ ndị na-ajụ onwe ha mgbe ha sụrụ ngọngọ na Pagefile.sys.
Ma ị ga - ahụ etu o si buru ibu, Pagefile.sys maka obere. Nke a bụ faịlụ Windows na-emepụta ma jiri ya jide ihe a maara dị ka ebe nchekwa mebere.
Virtual ebe nchekwa bụ nnoo sistemụ nke na-eji disk ohere kama n'ezie ebe nchekwa, kama n'ezie na ebe nchekwa mgbe usoro na-agba ọsọ nke na ebe nchekwa. Kwuo na i nwere gigabytes asatọ nke RAM na sistemụ gị, mana sọftụwia ị na-agba n'ụdị chọrọ iji ngụkọta 10. Yabụ ịchọrọ iji karịa RAM karịa ka ị tinyegoro na sistemụ gị.
Ihe Windows ga - eme bụ ịlele etu esi eji RAM ugbu a, ọ ga - ewekwa ihe ejibeghị n'oge, ihe ọ bụla nwere ike ịbụ, ma tinye ya n'ụzọ ahụ Dee na diski ike. Ebe nchekwa a, RAM nkịtị, enwere ike ịtọhapụ ma jiri onye ọ bụla chọrọ RAM n'oge a. Draịvụ ike nke dere ya bụ faịlụ a na - akpọ Pagefile.sys.
Paging bụ usoro nke ide ederede ma ọ bụ ibe nchekwa na diski na mgbe achọrọ ha. Gụọ ha azụ ma emechaa. N'ihi ya, ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya, ọ nwere ike ịnwe kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ RAM karịa nke ị rụnyere na kọmputa gị.
Ya mere ị nwere ike iwepụ ya? Mbụ anyị na-aga na kọmputa na-ele Pagefile.sys. Yabụ nke a bụ kọmputa m n'ụlọ Windows 10, aga m amalite Windows Explorer ebe a ma gaa na ndekọ mgbọrọgwụ nke C m, lee enweghị ihe ebe a.
Nke ahụ pụtara na m ga-agbanwe ụfọdụ nhọrọ ma ọ bụ gaa na Nhọrọ, gbanwee folda na nhọrọ ọchụchọ na taabụ Lee. Enwere ọtụtụ nhọrọ na-atọ m ụtọ igwu egwu. Onye nwere mmasi n’ebe a bu ihe ngosi gosiputara Faịlụ, nchekwa, na draịva.
Anyị ga-na ịpị na hideextensions n'ihi na nke ahụ bụ a nche nke na m n'ezie, n'ezie na-adịghị amasị. Mgbe ahụ, anyị ga-enweta nhọrọ iji zoo ndị echedoro kwa gbanyụọ faịlụ sistemụ. Ọ bụ ezie na ịdọ aka ná ntị dị, nke a bụ kpọmkwem ihe anyị chọrọ.
Aga m akụ, OK? Ma ugbu a ị nwere ike ịhụ na enwere ọtụtụ faịlụ ebe a na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ nke C karịa ka anyị siri chee na mbụ. N'ezie, otu n'ime faịlụ ndị ahụ bụ Pagefile.sys.
Can pụrụ ịhụ ebe a na ọ bụ gigabyte na ọkara nke ohere draịvụ ike. O kariri ma ọ bụ obere adaba na ebe nchekwa ị nwere na sistemụ gị. Ntọala ndabara dị iche ga-adịgasị iche dabere na ọtụtụ ihe dị iche iche, mana ọ bụ ihe ị nwere ike ijikwa ugbu a.
N'ezie, anyị ga-achọ ịhụ otu n'ime ihe ozugbo, ma anyị nwere ike ihichapụ ya. Mana n'ezie anyị enweghị ike. Faịlụ ahụ meghere na mmemme ọzọ Pagefile.sys na-emepe Windows mgbe niile ma ọ bụrụ na ahaziri sistemu iji iji ebe nchekwa mebere ma ọlị.
Nke ahụ pụtara na ịnweghị ike ihichapụ ya, opekata mpe ọ bụghị otu anyị siri edozi ya. Iji gbanwee faịlụ paging, anyị na-aga na usoro ihe nchịkwa, na mmewere sistemụ wee pịgharịa gaa na sistemụ na ntọala ntọala dị elu. Na ntọala usoro dị elu ị ga-ahụ taabụ 'Advanced' ma ị ga-ahụ na enwere arụmọrụ ebe a gụnyere ebe nchekwa dị adị.
Anyị pịa Ntọala. Anyị na-pịa Advanced ọzọ na ala nke mebere ebe nchekwa. Ọ na-agwa anyị.
Eeh, anyi nwere otu faili ihe nkpuchi gigabyte ano. Ka anyị gbanwee nke ahụ. Ugbu a, nke a bụ ndabara na Windows n'ezie ijikwa faịlụ paging maka gị.
Nke a bụ ezigbo ndabara belụsọ ma ịchọrọ ịme ihe ọzọ maka ụfọdụ ihe kpatara ya. Ma dị ka ị pụrụ ịhụ n’ebe a, anyị nwere nhọrọ nke ịkwaga faịlụ paging gaa na draịva dị iche iche. Anyị nwere nhọrọ iji gbanyụọ ha kpamkpam.
Aga m eme nke ahụ ugbu a. Ọ dị mma, gbanyụọ nha faịlụ akpaaka ejiri jikwaa maka draịva niile ka faịlụ paging sistemụ ahụ, ọnọdụ na nha dị ugbu a kpamkpam n'okpuru njikwa C. Ọ na - ekwu Jikwaa Sistemu.
spinrite bootable eriri
Anaghị m ekwu faịlụ swap ma pịa set. Ugbu a, n'ezie, ị ga-ahụ na ọ na - adọ anyị aka na ntị na nke a nwere ike ibute nsogbu nsogbu, nsogbu bụ na na-enweghị faịlụ paging ị nwere ohere ịmepụ ihe na ebe nchekwa ngwa ngwa karịa ma ọ bụrụ na ịnwere faịlụ paging. Ọ bụrụ na ị meela ka faịlụ paging wee hapụ Windows ka ọ chịkwaa nha ya, Windows nwere ike ịtọhapụ ebe nchekwa dị ka mmemme gị chọrọ, n'agbanyeghị agbanye RAM ị rụnyere na sistemụ gị.
Enwere arụmọrụ n'ihi na ị na-atụkwasị obi na draịvụ ike ahụ kama iji Ram, nke dị ngwa ngwa. Mana ọ bụrụ na ịmara na ị gaghị ajụ maka RAM karịa nke arụnyere na sistemụ gị, nke a bụ maka gị, yabụ achọrọ m ịga n'ihu? Ee ekwere m. Ma ugbu a ị nwere ike ịhụ oke faịlụ paging ebe a enweghị, ọ dịghị, ọnweghị ma ọ nweghị, na okwu ndị ọzọ mgbe m gwụchara, agaghị enwe paging m pịa ọfụma ma ị ga - ahụ ee ọ chọrọ ịmegharị maka mgbanwe a ka ọ rụ ọrụ.
Aga m eme nke ahụ. Anyị abịaghachila. Banye na Windows.
O doro anya na ọ ka ga-ebuba n'oge mmalite, yabụ ọ ga-adị ntakịrị nwayọ, mana agbanyeghị anyị nwere ike ịga n'ihu wee bido Windows File Explorer ozugbo, laghachi na ndekọ mgbọrọgwụ nke C m iji mee ka ọ dị obere karịa . You ga - ahụ na faịlụ paging ahụ apụla ma ọ bụrụ na ịnwere ike ihichapụ ya n'onwe gị n'oge a. Ma Windows dị mma ma ọ na-ehicha ya n'onwe ya ma na-ewepụ faịlụ paging n'ezie maka gị.
Approachzọ ọzọ, n'ezie, bụ iji sistemụ arụmọrụ dị iche iche bido site na Linux CD ma ọ bụ DVD dị ndụ, dịka ọmụmaatụ, ka ị nwee ike ịnweta ọdịnaya nke draịvụ ike. Ọ bụ ezie na Windows agaghị agba ọsọ na ọnọdụ dị otú a, a gaghị ekpochi faịlụ ahụ n'ihi na Windows anaghị agba ọsọ na ị nwere ike ihichapụ faịlụ ahụ n'ezie. Nke a bụ nsogbu.
Ọ bụrụ n ’ịgbanaghị nhazi Windows ka ọ ghara ịdịzị mkpa ma ọ bụ jiri faịlụ paging ma ọ bụ faịlụ paging, a ga-eweghachi ya na akpaghị aka oge ọzọ akpụkpọ ụkwụ Windows. Nanị ụzọ iji tufuo paging file bụ ịkwụsị iji mebere ebe nchekwa na Ifufe iji gbanyụọ ows. Anaghị m akwado nke ahụ, ị ​​nwere ike ime ya ebe ị maara na ị ga-enwe ọtụtụ RAM maka ngwa ọ bụla ị na-agba, mana n'ozuzu anyị anaghị eme ya.
Ohaneze enwere ọnọdụ mgbe niile ebe anyị chefuru na anyị nwere ọtụtụ taabụ ihe nchọgharị mepere ma Windows amalite ijikwa ebe nchekwa mebere anyị ka ọ ghara ịdaba. Echere m na nke ahụ nyere aka. Echere m na nke a bụ ụfọdụ ozi maka mmelite.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nke a, njikọ njikọta na ndị ọzọ, gaa na Askleo.com/15171. Abụ m Leo Notenboom.
Nke a bụ Askleo.com. Daalụ maka ikiri.
Kedu ka m ga-esi weghachite profaịlụ ọzọ?
Hichapụ faịlụ site na iji diski diski.
4, pịa Advanced taabụ ma pịa mgbanwe.
6, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazipeeji nke. sys in, họrọ ụgbọala D: ...
7, ọzọ pịa tinye na OK OK.
8, sistemụ a ga-ajụ gị ka ị malitegharịa, pịa Ee.
Kedụ ka m ga - esi tọgharịa faịlị peeji Windows 10?
Kọwaaihepeeji nkena mmechi naWindows 10iji Iwu Ndozi Obodo
PịaMmeri+ R igodo ọnụ na gị keyboard na pịnye: secpol.msc. Pịa Tinye.
Iwu Nchedo Obodo ga-emeghe.
N'aka nri, mee ka nhọrọ iwu kwụsị:Kọwaaebe nchekwa meberepeeji nkedị ka e gosiri n'okpuru.
Kedu ka m ga-esi belata sysfilefile na Windows 10?
1. 1. Na-agbanwe nha nkepeeji nke. sys
PịaWindowsIgodo + S wee banye elu. Họrọ Lee usoro ntọala dị elu site na menu.
Mgbe sistemụ Njirimarawindoemepe, pịa Ntọala bọtịnụ na formanrụ ọrụ ngalaba.
Nyagharịa Advanced taabụ.
Uncheck na-akpaghị aka jikwaafaịlụ pagingoke maka draịva niile.
Esi edozi pagefile.sys na Windows 10?
Ka ọ dị ugbu a, ụzọ kachasị mma iji dozie nnukwu pagefile.sys ga-abụ ịtọ nha ihu peeji nke ọdịnala ka ọ ghara ịbụ sistemụ nke Windows 10. Anyị tụlerela otu esi edozie ihu akwụkwọ ọdịnala iji dozie Windows 10 Slow Performance , ma otu usoro ahụ ga - enyere aka mee ka peeji nke ibe gi.sys laghachi na oke oke.
Etu esi ehichapụ, bugharịa ma degharịa peejifile.sys?
N'okpuru 'Sistemụ njikwa faili' họrọ 'Enweghị faịlụ paging'. Next, họrọ mpụga mbanye na-egosi n'okpuru C mbanye. Pịa bọtịnụ 'Set'. Gụọ ozi ịdọ aka na ntị wee pịa 'Ee' ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu. 3. Malitegharịa ekwentị gị na PC Gị usoro ga-mkpa Malitegharịa ekwentị maka mgbanwe ndị a na-mmetụta.
Kedụ ka m ga - esi chekwaa pagefile.sys na C drive?
Uncheck na-akpaghị aka jikwaa paging file size niile draịva nhọrọ. Họrọ C mbanye wee debe Onweghi faịlụ paging. Ugbu a pịa bọtịnụ Set. Họrọ draịva ịchọrọ iji chekwaa pagefile.sys. Họrọ Sistemụ jisiri nha nhọrọ wee pịa bọtịnụ Set.
Kedụ ka m ga - esi webata mkpokọta page.s.s gaa na draịva dị iche?
Họrọ C mbanye wee debe Onweghi faịlụ paging. Ugbu a pịa bọtịnụ Set. Họrọ draịva ịchọrọ iji chekwaa pagefile.sys. Họrọ Sistemụ jisiri nha nhọrọ wee pịa bọtịnụ Set. Pịa OK ịzọpụta mgbanwe. Malitegharịa ekwentị gị iji tinye mgbanwe. Mgbe ịmechara nke ahụ, a ga-akpali faịlụ faịlụ gị gaa na draịva dị iche.